Daawo Sawirro cajiib ah: TURKIGA oo dib u qurxinaya masjidka Is-baheysiga - Caasimada Online
Home Warar Daawo Sawirro cajiib ah: TURKIGA oo dib u qurxinaya masjidka Is-baheysiga
Daawo Sawirro cajiib ah: TURKIGA oo dib u qurxinaya masjidka Is-baheysiga
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha Diinta iyo Awqaafta Somalia, ayaa kormeeray masjidka weyn ee Isbaheysiga, magaalada Muqdisho, oo hadda dib loo dayac tirayo.
Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa markii uu tagay masjidka weyn ee Isbaheysiga, wuxuu u mahad celiyay wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Diinta ee xukuumadda Turkiga iyo dowladda hoose ee dalkaasi, oo masjidka dhisaya.
Masjidka weyn ee Isbaheysiga ayaa xilligaan waxaa ka socda howlo dayac tir ah oo ay wadaan shaqaalo Turkish ah iyo qaar Soomaali ah.
“Waxaan ballan qaadeynaa wixii kaalmo iyo xanaaneyn ah in aan u taagan nahay”, ayuu yiri Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee dowladda Soomaaliya.
Halkan ka daawo Sawirrada dhismaha masjidka